FITONDRANA JADON-DRAVALOMANANA : Efa ho 580 Miliara fmg ny hetra tsy voaloan’ny orinasa Tiko
Nihevitra ny Malagasy maro an’isa tamin’izany fotoana fa tena hitsinjo ny vahoaka madinika tokoa ingahy Ravalomanana Marc raha tonga eo amin’ny fitondrana. 10 décembre 2018
Nantenaina fa tsy mba hangalatra satria olona noheverina fa tena nanana ny maha izy azy. Solafaka anefa ny vahoaka Malagasy ka tafalatsaka tanteraka tao anatin’ny fahadisoam-panantenana lalina.
Nopotehan-dRavalomanana ary nalainy tahaka tao amin’ny orinasany avokoa ny vokatra vokarin’ireny orinasa marobe ireny. Raha hiverenana kely ny tamin’ny taona 2001, mba fantatry ny vahoaka Malagasy ve fa tamin’ny fotoana naha praiminisitra lefitra an’ingahy Pierrot Rajaonarivelo dia tsy nandoa hetra izay mitentina 250 miliara fmg ny orinasa Tiko. Nanjaka tanteraka ny jadona tamin’ny andro nitondran-dRavalomanana. Nofeheziny daholo ny seha-pihariana rehetra ary tsy nisy navelany ho lasa lavitra ireo orinasa mba te hisondrotra rehetra.